တစ်နှစ်ကျော်နီးပါးပရိသတ်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးနေပေမဲ့ အချစ်ခံရဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော Kim Woo Bin – Trend.com.mm
တစ်နှစ်ကျော်နီးပါးပရိသတ်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးနေပေမဲ့ အချစ်ခံရဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသားချော Kim Woo Bin
Posted on July 17, 2018 July 17, 2018 by Noel
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားချောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kim Woo Bin ကိုပရိသတ်တွေမမေ့ကြသေးဘူးထင်ပါတယ်နော်။ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေခဏရပ်စဲထားရတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေနဲ့အလှမ်းဝေးကွာနေတာပါ။မင်းသားဟာ nasopharynx ကင်ဆာ
ရောဂါခံစားနေရပြီး ၂၀၁၇ မေလကစလို့ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာ အခုချိန်ထိပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေက ရင်းနှီးသူတွေရဲ့ စကားအရ ပြန်လည်ကောင်းမွန်နေပြီလို့သိရပါတယ်။
မနေ့ကဇူလိုင် ၁၆ရက်နေ့က မင်းသား Kim Woo Bin ရဲ့ အသက် ၂၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ မင်းသားရဲ့အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ SidusHQ က အင်စတာဂရမ်မှာ မင်းသားရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းကတ်လေးတင်ထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။Caption မှာတော့ “Waiting for you to return one day, like nothing happened. Happy 30th birthday” လို့ရေးသားထားပါတယ်။နေပြန်ကောင်းလာပြီးအရင်တုန်းကလို အနုပညာအလုပ်တွေအတူတူလုပ်ကိုင်ဖို့ စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါ။
ဒီပို့စ်လေးကိုမြင်တဲ့ပရိသတ်တွေက Kim Woo Bin ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းကြတဲ့အခါမှာ “မင်းသားက ဆေးကုသမှုတွေအဆင့်ဆင့်ကိုခံယူနေတုန်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ အခြေအနေက တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါပြီ”လို့ အေဂျင်စီကပြန်လည်ဖြေကြားထားတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။၂၀၁၈ ရဲ့ ဧပြီလတုန်းကလည်း အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မင်းသား Kang Dong Won က Woo Bin ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပူဖို့နဲ့အခြေအနေပြန်လည်ကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုစကားပါးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေပါစေ သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေက အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ပရိသတ်တွေက Kim Woo Bin အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေအများကြီးရေးသားဆုတောင်းပေးခဲ့ကြတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းကတော့ ပရိသတ်တွေရေးသားထားတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းစာလေးတွေဖတ်ပြီးအားတင်းဖို့နဲ့ နေပြန်ကောင်းလာရင်လည်းအနုပညာအလုပ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေး အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သွားပါစေဆိုတာပါပဲ ❤ Happy belated birthday, Kim Woo Bin!
တောငျကိုရီးယားမငျးသားခြောတဈယောကျဖွဈတဲ့ Kim Woo Bin ကိုပရိသတျတှမေမကွေ့သေးဘူးထငျပါတယျနျော။ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့အနုပညာလှုပျရှားမှုတှခေဏရပျစဲထားရတဲ့အခြိနျဖွဈလို့ ပရိသတျတှနေဲ့အလှမျးဝေးကှာနတောပါ။မငျးသားဟာ nasopharynx ကငျဆာ
ရောဂါခံစားနရေပွီး ၂၀၁၇ မလေကစလို့ ဆေးကုသမှုခံယူနရေတာ အခုခြိနျထိပါပဲ။ဒါပမေဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကေ ရငျးနှီးသူတှရေဲ့ စကားအရ ပွနျလညျကောငျးမှနျနပွေီလို့သိရပါတယျ။
မနကေ့ဇူလိုငျ ၁၆ရကျနကေ့ မငျးသား Kim Woo Bin ရဲ့ အသကျ ၂၉နှစ်ပွညျ့မှေးနလေ့ေးဖွဈပါတယျ။သူ့ရဲ့မှေးနမှေ့ာ မငျးသားရဲ့အဂေငျြစီဖွဈတဲ့SidusHQ က အငျစတာဂရမျမှာ မငျးသားရဲ့ဓာတျပုံလေးနဲ့မှေးနဆေု့တောငျးကတျလေးတငျထားခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။Caption မှာတော့ “Waiting for you to return one day, like nothing happened. Happy 30th birthday” လို့ရေးသားထားပါတယျ။နပွေနျကောငျးလာပွီးအရငျတုနျးကလို အနုပညာအလုပျတှအေတူတူလုပျကိုငျဖို့ စောငျ့နတေယျဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျလေးပါ။
ဒီပို့ဈလေးကိုမွငျတဲ့ပရိသတျတှကေ Kim Woo Bin ရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီးမေးမွနျးကွတဲ့အခါမှာ “မငျးသားက ဆေးကုသမှုတှအေဆငျ့ဆငျ့ကိုခံယူနတေုနျးပါပဲ။ဒါပမေဲ့ အခွအေနကေ တိုးတကျကောငျးမှနျလာပါပွီ”လို့ အဂေငျြစီကပွနျလညျဖွကွေားထားတာမွငျတှရေ့ပါတယျ။၂၀၁၈ ရဲ့ ဧပွီလတုနျးကလညျး အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ မငျးသား Kang Dong Won က Woo Bin ရဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီးစိတျမပူဖို့နဲ့အခွအေနပွေနျလညျကောငျးမှနျနပွေီဖွဈတဲ့အကွောငျးပရိသတျတှကေိုစကားပါးခဲ့ပါသေးတယျ။
ဘယျလောကျပဲပရိသတျတှနေဲ့ဝေးကှာနပေါစေ သူ့ကိုခဈြတဲ့ပရိသတျတှကေ အမွဲတမျးရှိနပေါတယျ။ပရိသတျတှကေ Kim Woo Bin အတှကျမှေးနဆေု့တောငျးစကားတှအေမြားကွီးရေးသားဆုတောငျးပေးခဲ့ကွတာမွငျတှရေ့ပါတယျ။
ကိုယျ့ရဲ့မှေးနဆေု့တောငျးကတော့ ပရိသတျတှရေေးသားထားတဲ့ မှေးနဆေု့တောငျးစာလေးတှဖေတျပွီးအားတငျးဖို့နဲ့ နပွေနျကောငျးလာရငျလညျးအနုပညာအလုပျတှကေိုဖွညျးဖွညျးနဲ့မှနျမှနျလေး အကောငျးဆုံးလုပျနိုငျသှားပါစဆေိုတာပါပဲ ။ Happy belated birthday, Kim Woo Bin!
စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းရာတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အာရုံကိုဆွဲဆောင်သွားမယ့် ”Still/ Born”